के तपाईलाई अपचको समस्या छ ? अपच भएमा के गर्ने, के नगर्ने ? जान्नुहोस् (भिडियो सहित) - ज्ञानविज्ञान
– भारी खाना, धेरै खानु
– कुसमयमा खाना खानु
३. एलोभेरा (ध्यूकुमारी):
Don't Miss it व्यावसायिक रुपमा बाख्रा पालन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? समय दिई यो पढ्नुहोस
Up Next R बाट नाम सुरु भएका मानिसहरुको गुण, सोच्न सक्ने क्षमता (भिडियो सहित )